Gobollada Puntland oo maanta si weyn looga ciiday Ciid al Adxaa. – Radio Daljir
Gobollada Puntland oo maanta si weyn looga ciiday Ciid al Adxaa.
Galkacyo, Nov 27 – Munaasabadda ciidda ayaa maanta si weyn looga oogay dhammaan deegaannada dawladda Puntland, iyadoo kumanaan qof ay ku tukadeen garoomada kubadda cagta ee magaalooyinka waa weyn ee Puntland.
Ciiddaan oo ahayd ciidul-Adxa, ayaa maanta si isku mar ah looga wada ciiday dhammaan Soomaaliya gaar ahaanna deegaannada Puntland, waxaana munaasabadda ciidda dadweynaha kala qaybgalay madaxda sar sare ee dawladda Puntland oo ay ka mid yihiin M/weynaha, iyo guddoomiyaha golaha wakiillada.
Magaalada Galkacyo oo ka mid ah magaalooyinka waa weyn ee Puntland kana mid ah meelaha inta badan culimadu isku khilaafi jireen hal-mar wada tukashada salaadaha ciidda, ayaa maanta hal-mar si siman looga wada tukaday saaladdii ciidul-Adxa.
Garoonka kubadda cagta magaalada Galkacyo, ayaa maanta waxaa ku tukaday kunaan qof oo iskugu jira rag, dumar iyo carruur, waxaana salaadda ciidda kala qaybgalay mas?uuliyiinta maamulka gobolka, duqa magaalada iyo kuxigeennadiisa, waxayna dadweynaha u jeediyeen khudbado ay kaga hadlayeen xaaladda guud ee gobolka iyo midda magaalada Galkacyo.
Duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud Xaaji Xasan oo in muddo ah ku maqnaa safar dalka dibadiisa ah oo maanta munaasabaddaasi ka hadlay ayaa u mahadcelieyey shacab magaalada Galkacyo isagoo ku ammaanay sida ay gacan uga gaystaan adkaynta ammaanka magaalada.
Duqu, waxaa kale oo uu waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal-hayn aad u weyn oo ku saabsanayd dadka soo barakacay iyo sii joogitaankooda gobolka oo muddi ku jiray maalmihii ugu danbeeyey, waxaana arrintaas ay ka danbaysay kadib markii guddoonka gobolku uu soo jeediyey dadka soo barakacay in ay ku laabtaan gobolladoodii marka laga reebo meelaha colaaddu ay ka jirto.
Md. C/raxmaan, isagoo ka hadlayey munaasabadda ciidda wuxuu ku celcelyey dadka Soomaaliyeed in ay u siman yihiin dhulkooda aysanna jirin cid si gaar ah looga shaxeexanayo halkaan, isla markaana ay siman yihiin xuquuq iyo dhalasho ahaanba dadka gobolka u dhashay iyo kuwa ku soo barakacay.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad oo isna ka hadlay isla munaasabadda ciidda ayaa sheegay sida ay lagama maarmaanka u tahay in dadka shacabka ahi qayb uga noqdaan illaalinta ammaanka magaalada.
Culimada waa weyn ee ku sugan magaalada Galkacyo, ayaa markii la tukaday salaaddii ciidda dadka u soo jeediyey khudbado ducooyin ah oo ay alle kaga tuugayeen, caafimaad, cibaado suuban, iyo nabadgalyo waarta.
Sikastaba ha ahaatee dadweynaha reer Galkacyo farxadda ciidda ka sokow waxaa laga dheehan karay farxad labaad oo ah sida hal-mar looga wada tukaday saladdii ciidda magaalada Galkacyo, waxaana tan ka sii horraysay ciidul-fidrigii oo iyana sidaan oo kale hal-mar la wada ciiday.